Afọ iri asaa na ise nke ise, Enid Blyton kpochapụwo ụmụaka saga | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ndị edemede, Akwụkwọ ndị ntorobịa
Ọnwa Itolu 11, gara aga 75 afọ mbụ njem nke otu n’ime sagas ndị ama ama nke akwụkwọ ụmụaka na ndị na-eto eto n’akwụkwọ. Ọ bụ nke Ise na akụ agwaetiti. Na mgbakwunye, ọ mejupụtara afọ a 120s ọmụmụ nke onye okike ya, onye Britain na-ede akwụkwọ Enid Blyton.
Bipụtara karịa Asụsụ iri atọ, las mbipụta, mbipụta na mmegharị Igwe onyonyo nke usoro a enweghi ọgụgụ. Ha adịbeghị ewepu ya na esemokwu n'oge na-adịbeghị anya. Ma ihe kpatara ya nke ihe ịga nke ọma ya ka dị ike ma ọ bụ ya mere na a ka na-ere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nde otu afọ.
En Ise na akụ agwaetiti Mụnna Julian, Dick, Ana na nwanne nne ha Georgina na nkịta ha bụ Tim nọrọ n'oge okpomọkụ na-achọ akụ na-achọpụta otu puku na otu ihe nzuzo na Agwaetiti Kirrin. Nke a ga-eme ka ọbụbụenyi ga-eto nke ga-esiwanye ike na ọhụụ ọhụụ ọ bụla.
Na dika ha di Ise? Ọfọn Julian bụ onye kasị ukwuu na onye kasị elu, smart na ọrụ. Dick ma eleghị anya ọ kacha anụ ntị na ntabi anya, mana o nwekwara obi oma. Ana, nke ọdụdụ, na-elekọta ndị ọrụ ụlọ ihe a ga-eme. Na Georgina Achọrọ m ịdị dị ka nwata nwoke ma họrọ ka akpọọ gị Jorge. Ọ bụkwa onye kacha obi ike. Na Tim, n'ezie, nke ahụ bụ nkịta George, dịka onye nwere obi ike dị ka ya ma hụkwa mmadụ niile n'anya.
1 Ebumnuche mere anyị ji enwe mmasị na ha
2 Dum usoro
3 Mmegharị telivishọn
4 Ihe ngosi onyinye na Portugal
Ebumnuche mere anyị ji enwe mmasị na ha
Anyị ka na-amasịkwa ha n'ihi:
Anyị mụtara ịgụ ihe soro ha. Na ọgbọ ọhụrụ na-aga n'ihu na-eme otú ahụ.
Anyị na-enyocha maka oge mbụ. Na okike, n’ebe di omimi, n’ọgba nakwa n’ime ime obodo, ulo ndi gbapuru nwere uzo nzuzo zoro ihe kariri otu nzuzo.
Anyị na-achọpụta otu esi ahụ n'anya ma lekọta ụmụ anụmanụ. Onye na-achọghị inwe a nkịta dị ka tim, ike ọgwụgwụ nke ahụmahụ?
Anyị riri achịcha anụ niile nke uwa, sandwiches achicha di nro, sandwiches, sarsaparillas ma obu lemon.
Enweghị ndị okenye inye ikike na iwu, ọrụ ma ọ bụ ọrụ. Ha pụtara naanị iji kwadebe nri abalị ndị ahụ bara ụba ma ọ bụ nke siri ike. Ise ahụ nwere ike ime ihe ha chọrọ na-enweghị ha n'azụ ha. Ọ dịkwa anyị ka anyị nweere onwe ha dịka ha. Ha kụzikwaara anyị ime ihe ziri ezi banyere onwe anyị ma mata ihe nsonaazụ nke omume anyị nwere ike ịbụ.
na arụmụka doro anya, ma ha nwere mgbe ụfọdụ omume (ma ọ bụ omume, na ọnọdụ dị ugbu a) ma na-ejidekwa obi abụọ. N'ezie, ndị ọjọọ na-efukarị mgbe niile ma ndị ọma na-emeri. Na ụkpụrụ iji gosipụta nke ahụ ọbụbụenyi, iguzosi ike n'ihe, mgbalị na imekọ ihe ọnụ ihe ọ bụla kwere omume.
Ise na Akụ nke Island (1942)
Ọzọ njem nke ise (1943)
Ise Gawara (1944)
Ise na Smuggler's Hill (1945)
Ise na Caravan (1946)
Ise ise na Kirrin Island (1947)
Ise na-ama ụlọikwuu (1948)
Ise ahụ nọ na nsogbu (1949)
Ise na ihu njem (1950)
Izu ụka nke ise (1951)
Ise ahụ nwere ọ timeụ (1952)
Ise nke Osimiri (1953)
Ise na Mysterious Wasteland (1954)
Ise ahụ Nwee Obi 1955tọ (XNUMX)
Ise na nzuzo n'okporo ụzọ nzuzo (1956)
Ise na Billycock Hill (1957)
Ise na Nsogbu (1958)
Ise na Farim Finnish (1960)
Ise na Ọgba Ekwensu (1961)
Ise ahụ ga-edozi ilu (1962)
Ise Ise Ọzọ (1963)
Ndị kasị ama (na nke anyị niile hụrụ) bụ Usoro ndị Britain 1978 na ngosipụta 26 na oge 3, yana olu nke Enrique na Ana na mmegharị nke isi isiokwu. E nwere onye ọzọ mechara 1996, ngalaba-mmepụta nke UK, Canada na Germany. Nakwa usoro 26 na oge 2.
Ihe ngosi onyinye na Portugal
Site na Julaị 24 ruo Ọktọba 7 mba agbata obi na-egosi na Ọbá akwụkwọ mba Portugalna Lisboa, ihe ngosi kpomkwem banyere ihe omume a. Aha, Enid Blyton (1897-1968): afọ 75 nke ise, na-enyocha ndụ na ọrụ nke onye edemede a n'ozuzu ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Akwụkwọ ndị ntorobịa » Afọ iri asaa na ise nke ise, ụmụaka saga nke Enid Blyton
"4 3 2 1", nke ọhụrụ si Paul Auster